मदन लम्साल | गृहपृष्ठ | Page 2
Home Archives by: मदन लम्साल
मदन लम्साल Articles 87
प्रमको कृषि विकास फर्मुला
‘लगानी सम्मेलन २०१९’ पनि सकियो । अब मन्त्री, अर्थशास्त्री, विज्ञसिज्ञहरूलाई केही महीनासम्म गफ गर्न मसाला पुगेको छ । हुन पनि लगानी सम्मेलन सफल रूपमै सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । त्यति धेरै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको प्रस्तुति पनि दमदार नै रह्यो । अरू बेला अंग्रेजीमा बोलेको नसुने पनि सम्मेलनमा उद्योग, सञ्चार लगायत मन्त्रीहरूले अंग्रेजीमै दिएको प्रस्तुतिले वास्तवमा ठूलो पदमा पुगेपछि ज्ञान पनि स्वतः बढ्दो रहेछ भन्न...	बिस्तृतमा
आज मेला छ है !
आजदेखि शुरू हुँदै छ विदेशी लगानीकर्तालाई लोभ्याउन ‘लगानी सम्मेलन’ । लगानीकर्तालाई पैसा हाल्न फकाउन सरकारले झण्डै ७७ परियोजनाहरू शोकेसमा सजाएको छ । यो हेर्न ४० देशबाट करीब ७०० लगानीकर्ता आउने रे । पहिलेजस्तै भारत र चीन प्रतिस्पर्धामा छन्, कसले बढी परियोजनामा बोलकबोल गर्ने भनेर । बोल्दिने न हो, पछि लगानी गर्नैपर्छ भनेर कुनै कानून छैन क्यारे । पहिले पनि थुप्रै वाचा, प्रतिबद्धताहरू आएकै हुन् । लगानी आए नआएको हेर्ने कसलाई फुर्सद ? प्रमका कुरा पनि कडा...	बिस्तृतमा
नेपालले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने रे । त्यै भएर २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ भनेर घोषणा गर्द्या छ सर्खारले । त्यसमाथि भ्रमण वर्ष कार्यक्रमको संयोजक समेत नियुक्त गर्द्या छ । यति भएसी विश्वभरिबाट पर्यटकहरू ह्वारह्वार नेपाल आउने भएका छन् । केही समयअघि मात्र यो ‘लोन्ली प्लानेट’ भन्ने संस्थाले काठमाडौंलाई विश्वका घुम्नैपर्ने दशमध्ये पाँचौं सर्वोत्कृष्ट शहर भनेको छ । वास्तवमा काठमाडौं पाँचौं होइन, एक नम्बरमै पर्नुपर्ने हो । जहाजभित्र हुँदा ए...	बिस्तृतमा
ठूलो को ?
राजपाले संविधान संशोधन गर्न भनेर सरकारसँग किचकिच गर्‍या गर्‍यै गरेपछि सरकारले पनि ‘मधेशमा तिमीभन्दा ठूलो त अर्कै छ’ भन्ने प्रमाणित गर्न सीके राउतसँग अंकमाल गर्‍यो । राजपा जिल्ल परिराछ । यता ‘प्रचण्डको माओवादीभन्दा मेरै ठूलो हो’ भनेर विप्लवको माओवादीले देशमा विस्फोट गराउँदै हिँडेको थियो । तर, बाहिरको भन्दा सरकारभित्रको माओवादी नै ठूलो हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न होला सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसरीे हँसियाले हथौडालाई हिर्काय...	बिस्तृतमा
योजना आयोगको इच्छापत्र
नेपालमा बनेका अनेकौं आयोगहरूमध्ये धेरै चर्चामा आइरहने एउटा हो, राष्ट्रिय योजना आयोग । दशकौंदेखि यो आयोग देशको विकास योजना बनाउन तल्लीन छ । देशको विकास कति भयो भन्ने त जगजाहेर नै छ, यहाँ बेलिविस्तार लगाउनै परेन । यसै हप्ता आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजना बनाउन राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रिया पनि भव्यरूपमा सम्पन्न गर्‍यो । यसअघि पनि आयोगले यस्ता अन्तरक्रिया आयोजन गर्ने गरेकै हो । यसपाला पनि ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने काम सम्पन्न...	बिस्तृतमा
नेता हुन गाह्रो
नेपालमा नेता हुन धेरै गाह्रो हुँदै गएको छ । पहिलो त नेता बन्न जनताको दैलोदैलो चहार्नै पर्‍यो । ‘हामी तपाईंको सेवक हौं, हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्’ भनेर देखे जति, भेटे जति ऐरे, गैरे, खैरे सबैलाई जदौ, नमस्कार गर्दै हिँड्नुपर्‍यो । पर्‍यो भने जनताको घाँस काटेजस्तो गर्दिने, खेत रोपिदिए जस्तो पनि गर्दिने, उसको सुखदुःखको साथी जस्तो बनिदिने नाटक गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि चुनावमा पनि होम्मिनु पर्‍यो । चुनाव जित्न अनेकानेक चटक पनि मञ्चन गर्नुपर्‍यो । मा...	बिस्तृतमा
लोकका गीत गाइरहने पशुपति शर्माले एउटा नयाँ गीत के गाएका थे, सरकारी मान्छेहरूलाई हुनसम्म असह्य भएछ र धम्क्याएरै युट्युबबाट सो गीत हटाउन लाएछन् । शायद ‘लुट’ भन्ने चलचित्र हिट भएको देखेर होला, उनले पनि गाउँका कान्छाहरूलाई लुट्न भनेका थिए । तर त्यसले सरकारी मान्छेहरूलाई पो छोएछ । यो त चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नो खुट्टा हटाको जस्तो भएन र भन्या ? तर एक त कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि २ तिहाइवाला सरकारले नै अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता गीत नलेख्नू, नगाउनू र नसुन...	बिस्तृतमा
जोखिम अर्थतन्त्रमा लगानी सम्मेलन
सरकारले चैत महीनातिर फेरि लगानीकर्ताको भेला गर्दै छ । त्यहाँ थुप्रै लगानीका प्रतिबद्धता आउनेछन्, सम्झौता हुनेछन् । अनि त्यसपछि त के ? विदेशी लगानीकर्ता चट्ट नेपाल आउन थाल्नेछन्, ब्रिफकेसका ब्रिफकेस पैसा ल्याउनेछन् । जताततै ह्वार्ह्वार लगानी गर्न थाल्नेछन् । अनि तपाईं हामी बाँडीचुँडी खाउँला । कसो ? अझ विदेशी लगानी साँच्चिकै भित्र्याउने हो भने बेला न कुबेला कुनै अमुक देशको राजनीतिका विषयमा अनर्गल वक्तव्य जारी गर्दिनुपर्छ । अनि विश्वका लगानीकर्ताको...	बिस्तृतमा
कुन बाटोमा जाने हो ?
नेपालको विकासै भएन रे । किन नभएको त भन्दा देश कति वर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर बाटो नै स्पष्ट छैन रे । किनकि जसले बाटो तय गर्नुपर्ने हो, उनीहरू आ–आफ्नो दलको गुट उपगुट सम्हाल्न व्यस्त भए रे । जाने ठाउँ नै तय नभै हिँडेर पनि कहाँ पुगिन्छ र हो ? अर्को कुरा, पुग्नुपर्ने ठाउँ थाहा छैन र अलिअलि थाहाजस्तो भए पनि पुग्ने बाटाहरू फरक फरक भएकोले झन् द्विविधा भएको छ । कुनै दल भन्छ, अमेरिका, बेलायतको जस्तो बाटो हिँडे समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । अर्को दल भन्छ,...	बिस्तृतमा
लौ न के गरौं ?
भ्रष्टाचारमा देशले प्रत्येक वर्ष प्रगति गर्दै गैरहेको कुरा अब सामान्य ज्ञान भैसक्यो । त्यसकारण छेउ टुप्पो समाउन नसकिने यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यै भएर होला, अहिले सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा गर्न छाडेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा जोडतोडले लगाउने गरेको छ । तर यसको मतलब सबै नेपाली सुखी र समृद्ध हुन्छन् भनेर सरकारले भनेको चाहिँ होइन है । अब कसरी हुने त सुखी र समृद्ध ? सबै नेपाली सुखी र स्वस्थ हुने हो भने सबैले ध्यान, योग गर...	बिस्तृतमा